တရုတ် Translucent Film စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | လီမာ
ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစကားလုံးများ၊ ရိုင်းစိုင်းသောစကားစုများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုသင်၏အိမ်၊ စီးပွားရေး၊ သို့မဟုတ်ရုံးခန်းသို့ယူဆောင်လာပါ။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောသစ်သားများဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးစိတ်ပူပန်သောအရာများအတွက်သဲအနားများနှင့်လုံးဝန်းသောထောင့်များပါ ၀ င်သောဤဆိုင်းဘုတ်များကိုနံရံတွင်ချိတ်ဆွဲရန် (သို့) မိမိဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရပ်တည်ရန်ပြုလုပ်သည်။ မင်းရဲ့အသွင်အပြင်ကိုပြီးမြောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အဲဒီအထူးတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့စင်တွေ၊ ထိုင်ခုံတွေ၊ ပန်းကန်သုတ်ပဝါတွေ၊ ဗူးတွေ၊ မီးလုံးတွေစတဲ့အရာတွေကိုရှာဖွေဖို့မမေ့ပါနဲ့။
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ Acrylic/ သံမဏိသံမဏိ
အင်္ဂါရပ်များ ရေစိုခံခြင်း၊ ပါဝါနိမ့်ခြင်း၊ ကြာရှည်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ ကောင်းသော visual effect.etc
အရောင်ထုတ်လွှတ်သည် RGB ဖြစ်သည်
လုံခြုံသောဗို့အား DC 12V; (110V သို့ 220V ပါဝါတိုက်ရိုက်မချိတ်ဆက်ပါနှင့်)
ဒီဇိုင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း စိတ်ကြိုက်လက်ခံသည်၊ အမျိုးမျိုးသောပန်းချီအရောင်များ၊ ပုံစံမျိုးစုံ၊ အရွယ်အစားများရနိုင်သည်
လျှောက်လွှာ အိမ်တွင်း၊ အိမ်ပြင်၊ အလှဆင်ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာခြင်းနှစ်ခုလုံး
အပြင်ဘက်သုံးရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု ၁ ခု၊ အကောင်းဆုံးတာရှည်ခံနိုင်သောရွေးချယ်မှု
အက္ခရာ ၂ လုံး၊ ၁၀၀ မှ ၃၀၀ စင်တီမီတာအက္ခရာများပြုလုပ်ရန်သင့်တော်သည်
3 frontlit style (သို့) frontlit နှင့် backlit style နှစ်ခုလုံးပါ ၀ င်တဲ့အတွက်လူတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့မြင့်မားတဲ့တောက်ပမှုရှိလိမ့်မယ်
အက္ခရာ ၄ လုံးပေ့ါ
၁ မျက်နှာ၊ မျက်နှာကဲ့သို့ ၂.၆ မီလီမီတာအထူ acrylic၊ အထူ ၂.၅ စင်တီမီတာခန့်ရှိသည်
ဘေးနှစ်ဖက်သည် acrylic၊ မျက်နှာသည် stainless steel ဖြစ်သည်
ကျောဘက် ၃ ခု: acrylic backer
၄ င်းကိုတပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများ - mount ကိုဖြုတ်ရန် screw များ၊ ကပ်ရန်ဆီလီကွန် sealant
ရှေ့မီးပုံစံ ၅ မျိုး၊ သို့မဟုတ်ရှေ့မီးနှင့်နောက်မီးနှစ်ဖက်စလုံး
ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအတိအကျ! သုံးစွဲသောငွေနှင့်အလွန်လျင်မြန်သောပို့ဆောင်မှုနှင့်ထိုက်တန်သည်။ ပုံထဲကအတိုင်းပဲကြည့်ရတာကြီးကြီးမားမားမဟုတ်သလိုအရမ်းကြီးလည်းမကြီးပါဘူး။ ကြိုက်တယ်! ထုပ်ပိုးမှုကအရမ်းကောင်းတယ်၊ သူတို့က N ကိုကွေးမယ့်ဆိုင်းဘုတ်ကိုရောက်အောင်သွားလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ နံရံတစ်နေရာတွင်တွဲလောင်းထားရန် (သို့) တစ်ခုခုဘေးတွင်ထိုင်ရုံပင်မသင့်တော်ပါ၊ ဒါပေမယ့်တစ်စုံတစ်ခုရဲ့ဘေးမှာထိုင်ရင်မင်းဒါကိုထိန်းဖို့တစ်ခုခုလိုလိမ့်မယ်။ အလွန်ပေါ့ပါး။ လေးလံမှုမရှိ၊ ခိုင်ခံ့။ ဆွဲထားရန်လွယ်ကူသည်။
နောက်တစ်ခု: 3m Envision Tranlucent Film အတွက်အရည်အသွေးမြင့် - Translucent Film Light Box Picture - Lima